भारतमा ठूलो परिमाणमा आइफोन बनाउँदै फक्सकोन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय भारतमा ठूलो परिमाणमा आइफोन बनाउँदै फक्सकोन
on: April 16, 2019 अन्तरराष्ट्रिय
भारतमा ठूलो परिमाणमा आइफोन बनाउँदै फक्सकोन
नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतमा यस वर्षदेखि ठूलो परिमाणमा आइफोनको उत्पादन शुरू हुने भएको छ । ताइवानी प्रविधि कम्पनी फक्सकोन टेक्नोलोजी ग्रूपका अध्यक्ष टेरी गोउले यस वर्षदेखि भारतमा ठूलो परिमाणमा आइफोन उत्पादन हुने बताएका हुन् । एप्पल इंकको सबैभन्दा ठूलो एसेम्बलर फक्सकोनले चीनको उत्पादन भारतमा सार्न लागेको हो । कम्पनीले चीनमा ठूलो परिमाणमा आइफोन उत्पादन गर्दै आएको छ ।
गोउले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई भारतमा आइफोन उत्पादनको लागि निमन्त्रणा दिएको बताएका छन् । भारतको बैंगलुरुमा रहेको प्लान्टबाट केही वर्षदेखि एप्पलका पुराना मोडलका फोनहरू उत्पादन हुँदै आएको छ । तर, अहिले उक्त प्लान्टबाट नयाँ मोडल उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको हो । यसअघि फक्सकोन भारतको चेन्नईमा ठूलो परिमाणमा आइफोन बनाउनुपूर्व परीक्षण उत्पादनका लागि तयार रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ताइवानमा भएको एक कार्यक्रममा गोउले यो निर्णयसँगै भारतको स्मार्टफोन बजारमा आफूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । चीनमा स्थानीय प्रतिस्पर्धी कम्पनीका कारण आइफोनको व्यापारमा पछिल्लो समय कमी आएको छ । भारतको स्मार्टफोनको बजार भने बढ्दो क्रममा छ ।
भारतको स्मार्टफोन बजारमा आइफोनको अंश निकै कम छ । आइफोन निकै महँगो भएकाले पनि स्मार्टफोनको व्यापारमा आइफोन पछाडि परेको हो । भारतमा ठूलो परिमाणमा आइफोन उत्पादन हुँदा आइफोनको आयातका लागि बुझाउनुपर्ने २० प्रतिशत कर पनि बुझाउन पर्दैन । गतवर्ष भारतमा १४ करोड स्मार्टफोनको व्यापार भएको थियो । यसमध्ये केवल १७ लाख आइफोन विक्री भएको थियो । एजेन्सी
तस्वीर : नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझाव संकलन कार्यक्रम
एशिया फाइनलका लागि खेलाडी छनोट
मल्टीपर्पस फिनांसको हकप्रदको लागि बुक क्लोज
भूकम्पका कारण चीनमा ११ को मृत्यु
स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश–१ को आर्थिक अवस्था कस्तो ?
स्वदेश फर्किएर चप्पल उद्योग सञ्चालन
इन्सेफ्लाइटिसबाट १०० भन्दा बढिको ज्यान गएपछि…….
सहकारीमा आबद्ध महिलाहरुद्वारा ‘डेरी फार्म’ सञ्चालन
प्रदेश–३ का नारा तथा कार्यक्रम : ‘निःशुल्क कानूनी सहायता’देखि ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’सम्म
दोस्रो घण्टामा नेप्सेमा १.५५ अंकले बढ्यो (१ बजेको अपडेट)